कले’जोमा देखिएको सम’स्या कसरी थाहा पाउने ? यस्ता देखिन्छन् ल’क्षण…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौ : शरीरको अंगमा सबैभन्दा ठुलो अंग हो कलेजो । हुनतः यसलाई छाला पछिको दोश्रो ठुलो अंग पनि मानिन्छ । अन्य अंग जस्तै क’लेजो पनि शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । यसको सम्बन्ध पाचन प्रक्रि’यासँग हुन्छ ।
स्वस्थ मानिसको कले’जोको वजन १.३ किलोग्राम देखि १.६ किलोग्रा’मसम्म हुन्छ । रातो र खैरौ रङमा हुने मानव शरीरको यो अंगले शरीरमा भएको विष वा विभिन्न रसा’यन फि’ल्टर गरी पि’त्त उत्पादन गर्छ र दि’सा र पि’साब मार्फत बाहिर फाल्दछ ।
क’लेजोले शरीरमा ३ सयभन्दा बढी काम गर्छ । यसले र’गतमा चिनीको मात्रालाई समेत सन्तुल’नमा राख्दछ । कलेको अर्काे महत्वपूर्ण कार्य भनेको र’गत निर्माण गर्नु पनि हो । यदि कलेजोले काम गर्न छोड्यो भने मानिसको मृ’त्युसम्म हुन्छ ।
त्यसैले कलेको स्वास्थ्यका बारेमा ‘सर्तक हुनु पर्दछ । यदि क\_लेजोमा स’मस्या आयो भने शरीरमा निम्न संकेत देखा पर्दछ । जसको कारण क’लेजो ख’राब भएको थाहा पाउन सकिन्छ ।
१. यदि क’लेजोमा स’मस्या आयो भने छाला पहेँलो हुँदै जान्छ । त्यसैगरी, आँखामा समेत प’हेँलोपन बढ्दछ । पि’साब पनि पहेँलो हुन्छ ।
२. कलेजोको सम’स्या बढ्दै गए रगत बान्ता हुन थाल्दछ । बा’न्तामा र’गतको छि’र्का देखियो भने कले’जोको सम’स्या भएको हुनसक्छ ।
३. एकाएक कलेजो अस्वस्थ भयो भने हात_]’गोडा सुन्निन थाल्दछ । पेटभन्दा तल सु’न्निएको महसुस हुन्छ । हातगोडा धेरै सुन्निए क’लेजो ख’राब स्थितीमा भएको बुझ्नु पर्दछ ।
४. बिना परिश्रम थकान र कम’जोरी भए, निन्द्रा कम लागेमा पनि क’लेजोको सम’स्या हुनसक्छ।
५. खानाको स्वाद थाहा नहुनु, बारम्बार स्वाद फरक लाग्नु, मुखबाट अर्कै गन्ध आएमा समेत क’लेजोको समस्या हुनसक्छ ।
यदि माथिको ल’क्षण मध्ये कुनै पनि ल’क्षण देखा परे तत्काल उपचार गर्न अस्पताल जानुपर्छ।
Previous उच्च रत्त’चाप कम गर्न खानुहोस यी घरेलु खानेकुरा…पूरा पढी सेयर गर्नुहोस् ।
Next दुधमा तुलसीका पात उमालेर खादा हुन्छ, यति धेरै फाइदा…हेर्नुहोस् ।